‘काम गर्ने यो शैलीले प्राधिकरण उँभो लाग्दैन’(कुलमान घिसिङ संगको कुराकानी हेर्नुस) – Purba Aawaj
‘काम गर्ने यो शैलीले प्राधिकरण उँभो लाग्दैन’(कुलमान घिसिङ संगको कुराकानी हेर्नुस)
प्रकाशित मिति: आइतबार, आषाढ २७, २०७८ समय: १८:१३:००
काम सुरु भएको ११ वर्षपछि माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएको छ ।
आयोजनाको सुरुवाती लागत ३५ अर्ब तोकिए पनि अमेरिकी डलरको मूल्यमा आएको उतारचढाव, ब्याजलगायतका कारणले भने बढेर झन्डै ८० अर्ब रुपैयाँको हाराहारी पुगेको छ ।
माथिल्लो तामाकोसी मात्रै होइन देशका धेरै ठूला आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन सक्दैनन्, लागत पनि दोब्बर दाेब्बर हुन्छ, आयोजनाले लागत खर्च कटाएर प्रतिफल दिन वर्षाैँ कुर्नुपर्ने हुन्छ । तामाकोसीबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएसँगै ऊर्जा ख’पतको चि’न्ता पनि थपिएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले ऊर्जा ख’पत बढाउन कामै नगरेको गुनासा पनि छन् । जलविद्युत् क्षेत्रका विविध विषयमा अर्जुन पोख्रेलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग गरेको कुराकानी ।
केही काम त भएका छन् । तर र’ण’नीतिक हिसाबले अघि बढ्नुपर्ने परियोजनाहरू, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सेवा ‘स्मार्ट’ बनाउने योजना, लाइन अन्डरग्राउन्डका कुरा, स्मार्ट मिटर जडानदेखि राष्ट्रिय महत्त्वका ठूला र नयाँ आयोजनामा भने निकै ढिलाइ भएको छ । काम नै अघि बढाउन नसकेको देखिएको छ । प्राधिकरणलाई ‘स्मार्ट’ बनाउने भनेर पाँच वर्षे कर्पोरेट डेभलपमेन्ट प्लान बनाएका थियौँ, त्यसलाई बोर्डबाट स्वीकृत गराएर अघि बढाएका थियौँ तर त्यो काम अहिले खासै अघि बढेको जस्तो लागेको छैन ।
अब माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको कुरा गरौँ, तपाईँ प्राधिकरणमा रहँदा पनि निकै दौ’डधुप गर्नुहुन्थ्यो । धेरै समय र खर्च भइसकेको छ । बल्ल पहिलो युनिटबाट बिजुली उत्पादन भएको छ । नेपाललाई विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउन र अरू आयोजनाको सिकाइका लागि यो कत्तिको महत्त्वपूर्ण आयोजना हो ?
माथिल्लो तामाकोसीले विद्युत् उत्पादन थाल्दा सबैभन्दा धेरै खुसी म नै छु जस्तो लाग्छ । यो आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि भएको दौडधुप र दुःखलाई सम्झेर अहिले आनन्द लाग्छ । यो आयोजना तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण विष्टको कार्यकालमा शिलान्यास भएको थियो ।
काम नभएको भए विद्युत् उत्पादन हुने थिएन, काम भएरै उत्पादन सुरु भयो । अहिले प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहनेदेखि सञ्चालक समिति, सचिव, मन्त्री र हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्म सबै बधाईका लागि योग्य हुनुहुन्छ । तर आयोजनाको ९९ प्रतिशतभन्दा धेरै काम गएको वर्षको साउनमै भएकाे थियो ।
३५ अर्ब रुपैयाँको लागत बढेर ८० अर्ब रुपैयाँमा पुग्दा कतै ग’डबडी हुन सक्छ भनेर शङ्का गर्नु पनि स्वाभाविक नै होइन र ?
नेपाली नागरिकको लगानीमा बनेका आयोजनाको बिजुली भारतले किन्दैन होला भनेर डराएर बस्नुको साटो हामीले पटक–पटक भारतसँग संवाद गर्ने र द’बाब दिने कोसिस गर्नुपर्छ । प्राधिकरणको यो नेतृत्वको ध्यान त्यतातिर कम भएको जस्तो लागेको छ मलाई । खबरनेपाल
Last Updated on: July 11th, 2021 at 6:28 pm